Isizinda se-Ultrasonic kanye neNqubo Yayo yokusebenza - Hielscher Ultrasound Technology
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyindlela ekhethekile yokuhlukanisa amakhompiyutha we-bioactive kusuka kuma-botanicals. I-Sonication ifinyelela isizinda esiphelele bese ngaleyo ndlela ukutholakala kokukhishwa okuphakeme kutholakala ngesikhathi esifushane kakhulu sokukhishwa. Ukuba yindlela ephumelelayo yokukhishwa kanjena, ukususwa kwe-ultrasonic kuyindleko- nesikhathi esonga isikhathi, kanti kube nomphumela wokukhishwa kwekhwalithi ephezulu, okusetshenziselwa ukudla, izithasiselo kanye nemithi.
Isizinda se-Ultrasonic sisetshenziswa embonini yokudla, yokudla okwenziwe ngomsoco kanye nasemkhakheni wezemithi ukukhipha amakhompiyutha anhlobonhlobo njengamavithamini, ama-polyphenols, ama-polysaccharides, ama-cannabinoids kanye namanye ama-phytochemicals avela ku-botanicals. Ukukhishwa okusizwa yi-ultrasound kusekelwe kumgomo osebenzayo we-acoustic noma we-ultrasonic.
Ngabe isebenza kanjani i-Acoustic Cavitation?
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kutholakala lapho amagagasi aphezulu, amaza omoya ophansi ehlanganiswa abe yi-slurry equkethe izinto ze-botanical solvent. Amagagasi anamandla aphezulu we-ultrasonic ahlanganiswa nge-processor yohlobo lwe-probe-hlobo ku-slurry. amagagasi anamandla we-ultrasound ahamba ngemijikelezo esebenza ngoxhaxha esenza imijikelezo ephezulu yokucindezela / okucindezela okuphansi, okuphumela kummangaliso we-acoustic cavitation. Ukuhamba kwe-acoustic noma i-ultrasonic kuholela endaweni yakwamazinga okushisa ngokweqile, izingcindezi, amazinga okushisa / okupholisa, umehluko wokucindezela kanye namandla aphezulu e-shear phakathi nendawo. Lapho ama-bubble we-cavitation efaka ebusweni bezinto ezinamandla (ezinjengezinhlayiya, amaseli ezitshalo, izicubu njll.), Ama-jets amancane nokushayisana kwe-inclarticlular kukhiqiza imiphumela efana nokubhoboza komhlaba, ukuguguleka, ukuqhekeka kwezinhlayiyana, i-sonoporation ) nokuphazamiseka kweseli. Ngaphezu kwalokho, ukuvezwa kwama-bubble we-cavitation kwimidiya ye-liquid kudala ukuxubana kwama-macro-turtle kanye nokuxubana okuncane. I-Ultrasonic irradiation imele indlela ephumelelayo yokuthuthukisa izinqubo zokudlulisa ngobuningi, ngoba i-sonication iphumela emgudwini nezinqubo zayo ezihlobene njengokuhamba kwe-micros-by jets liquid, compression and decompression in the material with a following following wall of cell wall, and heating high and amazinga okupholisa.
I-Probe-Type ultrasonicators ingakhiqiza ama-amplopes aphezulu kakhulu, okudingekayo ukukhiqiza i-capacitor enomthelela. I-Hielscher Ultrasonic yenza okokusebenza kwe-ultrasonic okwenziwe okuphezulu, okungakha kalula amplidence we-200µm ekusebenzeni okuqhubekayo kwe-24/7. Ngezikhuliso eziphakeme ngisho nangokwengeziwe, iHielscher inikeza ama-sonotrodes aphakeme kakhulu wesibalo.
UP400St Isizinda se-Ultrasonic seBotanical Material ku-8L Batch
Ukuphazamiseka kweseli ye-Ultrasonic nokwanda kokudluliswa kweMass
I-Ultrasound ingasiza izinqubo zokukhishwa zombili ngokuphazamiseka kweseli nangokuthuthukisa ukudluliselwa kwesisindo kungqimba lomngcele oluzungeze i-matrix eqinile.
I-Sonoporation, ukugcotshwa kwezindonga zeseli nolwelwesi, kuthuthukisa ukuqina kwezindonga zeseli kanye nolwelwesi futhi kuvame ukuba yisinyathelo esiphakathi ngaphambi kokuba amaseli aphazamiseke ngokuphelele yi-sonication.
Imiphumela yemishini ye-ultrasound eyenziwe nge-ultrasound, efana nokushisa nokufakelwa kwengcindezi, amaza okuqhaqhazela, amabutho okujikijela nokusakazwa okuncane, kuqinisa ukungena kwe-solvent okuphakathi kwangaphakathi futhi kuthuthukise ukudluliselwa kwesisindo phakathi kweseli nokuxazululwa ukuze izinto zokwenziwa zihanjiswa ku-solvent.
Ama-Hielscher Ultrasonics processors ayizinhlelo zokukhishwa okuphezulu kokusebenza, ezilula futhi eziphephile ukusebenza. Ngokuya ngendwangu yakho eluhlaza, amandla okusebenza nenhloso yokuphuma, i-Hielscher ikunikeza i-ultrasonicator efanele kakhulu. Iphothifoliyo yethu yomkhiqizo isukela ku-compact, ama-ultrasonicators aphethwe ngesandla anamandla ngaphezulu kwesistimu ebhentshini ephezulu kuya kumayunithi we-ultrasonics aphelele ezisebenza ukucubungula amathani amaningana ngehora.
Izithasiselo ze-Hielscher Ultrasonics zingasetshenziselwa i-batch kanye nokukhishwa okuqhubekayo kwe-inline futhi singasetshenziswa ngokuhambisana nanoma iyiphi i-solvent.
Izesekeli ezahlukahlukene ezinjengama-sonotrodes (ama-probes) ezinobukhulu obuhlukahlukene nobukhulu, izimpondo zesikhuthazo, amaseli okugeleza anamavolumu ahlukahlukene namajomethri, izinga lokushisa le-plugable kanye ne-sensor yengcindezi namanye amagajethi amaningi atholakala ukubutha ukusetha kwe-ultrasonic ekahle inqubo yakho yokususa.
Wonke amamodeli wethu wedijithali ahlome nge-software ekhaliphile, ekuvumela ukuthi uguqule, ubheke, futhi usethe nemingcele yokukhipha. Ngenxa yokulawulwa okuqondile kokukhula, isikhathi se-sonication nesikhathi somsebenzi, imiphumela emihle yenqubo efana nesivuno esiphakeme nekhwalithi ephezulu kakhulu yokudonsa ingatholakala. Ukuqoshwa kwedatha okuzenzakalelayo kwenqubo ye-sonication kuyizisekelo zokumiswa kwenqubo kanye nokuzalwa kabusha / ukuphindeka, okudingeka kuMikhuba Yokukhiqiza Okuhle (GMP).
Okukhishwe kwe-botanical yizakhi ezixubile, ezihlukaniswe ngezinto zezitshalo ezinjengamakhambi, izimbali, amaqabunga, iziqu, izimpande nezinye izingxenye zezitshalo. Izinhlanganisela ze-bioactive ezinjengamavithamini, ama-antioxidants, ama-polyphenols, ama-polysaccharides, ama-cannabinoids namanye ama-molecule ezitshalo asetshenziswa njengezengezo zokudla ezisebenzayo, ama-nutraceuticals, ama-cosmeceuticals, amakhemisi kanye nemibala yemvelo.